Zotung Christian Church cipaw tuh ah Zotungram kya ccangpaw Buu kya ah lah um oh zema USA kya ah thua oh te Buu blyn soiluakute nawccawte raekupaw Buu nynh thua. Zotung Christian Church tuh ahung cipaw laesaleite Khrih zyntu blyn nynh pumkubua kho thua zah, vaeccawnaw mah rae kho athua. E&...
ချင်းလူမျိုးများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောင်ပေါ်ဒေသနှင့် မြေပြန့်ဒေသများတွင် ရှေးပဝေသဏီကပင် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းတိ Read More...
ဇိုတုန်မျိုးနွယ်စုများသည်အများအားဖြင့်မြောက်ပိုင်းဖလမ်းမြို့ နယ်နှင့်ဟားခါးမြို့ နယ်ဖက်မှလာရောက်ဆင်းသက Read More...
"အမှာစာ" ဇိုတန်မျိုးနွယ်စု၏ သမိုင်းများစွာ ရှိသ Read More...
ချင်းအမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ကြွန်ဘိခ် (၀ါ) ဗိုလ်စွန်ပက်၏ ဗြိ
ဗမာ့သမိုင်းတွင် ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် ထင်ရှားလျက်ရှိသော ချင်းအမျိုးသား ဗိုလ်ကြွန်ဘိ Read More...
Zotung (ဇိုတုန်) မျိုးနွယ်စုဆင်းသက်လာပုံ
ဇိုတုန်မျိုးနွယ်စုများသည် အများအားဖြင့်မြောက်ပိုင်းဖလမ်းမြို့နယ်နှင့် ဟားခါးမြို့နယ်ဖက်မှ လာရောက် ဆင်းသ Read More...
မှးမှိန်နေသော ချင်းလူမျိုးနွယ်စုအကြောင်း သိကောင်းစရာ
မှေးမှိန်နေသော ချင်းလူမျိုးနွယ်စု အကြောင်းသိကောင်းစရာ စာတမ်းအားဖြင့် ချင်းမျိုးနွယ်စု ( ၅၃ ) မျိုးတွင်ပါဝင်သော Read More...
သတိ (1) . . . ချင်းလူမျိုးကြီးထဲက ဇီုမီး zomi မျိုးနွယ်စုကလေးများ ချင်းအမျိုးသားနေ့ စော်ကားမှု ဖြင့် အရေး Read More...